Ziziphi iirhafu ze-Google Analytics Bounce? - Semalt Inika Impendulo
Abanikazi bewebhusayithi kufuneka bazi ukuba bangaphi abantu abavakashela iisayithi zabo imihla ngemihla ukuvavanya ukusebenza kwabo. Enye yemetrikhi esetyenzisiweyo ukulinganisa la ma pesenti yinqanaba le-bounce elirekhoda inani labantu abemi umhlaba kwaye bangenzi nto kuwo.
Umsebenzi onjalo ngeendwendwe awubangeli nasiphi na impendulo evela kwi-Google Analytics. UJack Miller, uSemalt uMphathi oyiNtloko kuMphathi weMpumelelo, uchaza ukuba ukuhlawula amanqanaba kunceda abanikazi bewebhu ukuba bahlole umgangatho wephepha okanye abaphulaphuli babo. Umgangatho wabaphulaphuli ubhekiselele ukuba ingaba isayithi ifanelwe injongo yaso.
Ukubalwa kweeRhafu ze-Google Analytics
I-Google ibala iirhafu zokuhlawula ngokuhlula iseshoni yephepha elilodwa kuzo zonke iiseshoni ezikhoyo.
Ukuba nezinga eliphezulu lokunciphisa iwebhusayithi okanye iphepha lingaba neyiphi na into echaphazelekayo:
Umgangatho walephepha elithile lusezantsi.
Abaphulaphuli abajoliswe kuyo bayiphutha kwizinto ezithunyelwe kwisayithi.
Ulwazi olukwiphepha elithile lanele ngokwaneleyo.
I-Bounce Rate kunye ne-SEO
Kukho ingxoxo eninzi malunga nokuba iinjongo zokukhangela zisebenzisa iirhafu zokuhlawula njengento yokubeka indawo. Kunzima ukucinga iGoogle ithatha idatha kwiGoogle Analytics ukuyisebenzisa xa usetha iiwebhsayithi. Isizathu salo mgca wecinga kukuba ukuba umnini akayi kufezekisa ngokufanelekileyo i-GA, ngoko ulwazi aluqinisekanga. Kwimeko nayiphi na into, kulula ukulawula amazinga omhlaba. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba abantu bahlala kwisayithi kwi-injini yokusesha . Uhlobo olunjalo lokubetha lunokuba ngumgangatho wesimo, kodwa kungekhona indlela esiyibona ngayo kwi-GA.
Ukutolika amaxabiso eBounce
Ukuba injongo yephepha ikwazisa, isantya sokuphakama esiphakamileyo asiyiyo into embi. Iingcali zicebisa abanikazi ukuba benze amaqela aquka kuphela iindwendwe ezintsha. Iindwendwe ziyi-nudge ukuphucula ukubandakanya kwisayithi.
Ukuba iphepha libhekiselele ekubandakanyeleni iindwendwe, ke ukwanda kwimivuzo yokuhlawula kuyingozi kumashishini. Ukuphuculwa kwephepha ngokwalo yenye yeendlela zokulungisa le mpazamo. Kukho ezinye izizathu zokuhlawula amanqanaba aphakamileyo, kwaye phezulu kwazo zikhangelelwano. Ukuba inkcazo ayihambelani nomxholo, iindwendwe ziya kuhamba kwiphepha. Ukuba umntu ucacile ngemisebenzi yesayithi, ngoko izinga eliphantsi lokuhlawula libonisa uphawu lomgangatho wabaphulaphuli.
Ixabiso lokuhlawula kunye nokuguqulwa
Ukuhlawula ixabiso lilinganise impumelelo, kwaye ukwanda kunokunceda umnini utshintshe ukucwangciswa ukuphucula ukuguqulwa. Kwakhona, imithombo yendlela yokuncedisa inokukunceda ekuqaliseni ukuba kutheni abantu baninzi. IiNcwadana, iiwebhusayithi zokudlulisa, kunye I-AdWords inokubamba iqhaza ekunciphiseni amaxabiso. Ukugcina iliso elibukhali kulezi zinto kunokuncedisa ukunciphisa ingxaki kunye nokuphucula amazinga okuguqulwa.
Ukunyamekela xa Udweba izigqibo
Isantya esingenakuhlaselwa ngokungaqhelekanga sisona nto esithumela i-KG inokuthi inokuphunyezwa ngokungalunganga. Bokuba ngaba-pop-ups okanye amavidiyo adlala ngokuzenzekelayo ngumnini. Ukuba nezinga eliphantsi lokuhlawula kunye neziganeko ezijongene nokukhangela i-akhawunti kwindawo efanelekileyo kukuba
Ukunciphisa ixabiso lokuhlawula
Indlela yodwa yokwenza oku kukukhuphula umgangatho wokuzibandakanya kumaphepha okufika. Iindleko eziphakamileyo ezivela kwimithombo yamanye kufuneka zikhokele umnini ukuba agcine kwaye ahlole oko okulindelwe ngabavakalisi malunga naloo nto. Ukuba izinto ezilindelekileyo zilungile, kodwa usenamazinga aphakamileyo aphezulu, kwaye ukugqitywa kwephepha elipheleleyo kusondele.
Abanye abantu baphazamisa ixabiso lokuhlawula kunye nokuphuma kwamazinga. Ukuphuma kwamazinga kubhekise kwiseshoni yokugqibela yomsebenzisi nokuba kutheni bawuphelise kwiphepha elithile
Ukuhlawula amaxabiso kufuneka kuncedise ukuba i-site ihlala ifikelela kulindeleke kubaphulaphuli. Kwakhona, kufuneka bancedise ekwakheni indawo engamkelekanga kubasebenzisi.